Tim Murphy - McKnight Foundation
Isdhexgalka Barnaamijka, Bulshooyinka Fir -fircoon & Sinnaanta
Tim Murphy wuxuu u shaqeeyaa door isku -dhafan oo ah sarkaalka barnaamijka oo leh kooxda Is -dhexgalka Barnaamijka iyo kooxda Bulshooyinka Vibrant & Equitable. Doorkan, wuxuu fidiyaa awoodda kooxaha barnaamijka McKnight, isagoo kor u qaadaya is -waafajinta istiraatiijiyadeed iyo wax -ku -oolnimada abaabulka xagga horumarinta himilooyinka barnaamijka iyo himilada Aasaaska. Waxa uu aad u jecel yahay in uu xuddun u noqdo sinnaanta dhammaan hawlgallada Mu'asasada, wuxuuna u keenaa shaqada hagaajin joogto ah.
Murphy wuxuu ku biiray aasaaska maamulaha barnaamijka Cimilada & Tamarta ee 2016.
Intaa ka dib, wuxuu u adeegay kooxda Deeqaha & Hawlgallada Barnaamijka ka hor inta uusan noqon sarkaalka barnaamijka ee kooxda Bulshooyinka Firfircoon & Sinnaanta leh. Laba darajo ayuu ka haystaa Jaamacadda Minnesota: shahaadada koowaad ee cilmiga deegaanka, siyaasadda, iyo maamulka iyo MBA oo uu ka qaatay Carlson School of Management.
Murphy wuxuu ku nool yahay koofurta Minneapolis isaga iyo eygiisa Ole, waana xubin guddi iskaa wax u qabso ah Mile in My Shoes, oo ah urur ficil bulsheed oo adeegsada awoodda orodka si uu u beddelo aragtida iyo beddelka nolosha.
Waxaa qoray ama Astaamaha
Kakan iyo Khilaafka: Dhulka Powderhorn
By Tim Murphy Ogosto 2021